“Nisy ny tsy fahatomombanana ka voatery najanona ny sidina ary mbola ao ilay fiaramanidina amin’izao. Raha iny nandeha hiainga iny ny roplanina mpitondra entana dia ren’ny mpanamory fa nisy karazana piesy nikorontana ka nampiasa hisatra tampoka izy hijanonan’io fiaramanidina io. Ny fifampikasohan’ny kodiarana tamin’ny lalana vita tara no niteraka setroka fotsy izay endrika setroka “normal” fahita tahaka ny fiaramanidina rehefa hipetraka amin’ny tany. Mpanamory telo sy teknisianina iray no tao anatiny ary “load master” 1 ka azo antoka fa tsy hampisahotaka olona izany. Zotra “normal” amin’ny tranga toy izao ny fanamarinan’ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany miasa eny amin’ ny seranam-piaramanidina ka tsy nahitana firehetana na fipoahana velively. Ny alatsinainin’io ihany dia tonga ny teknisianina nohafarana avy any Torkia, rehefa nojerena dia piesy no simba tao ka efa ho avy ato ato ny solony”, hoy ny tompon’andraikitra iray izay nanazava ny zava-nisy marina. Tsy mitombina noho izany ny vaovao navoaka ny talata 28 mey 2019 teto amin’ny gazety Tia Tanindrazana laharana faha-2950 fa nivoahana afo narahina setroka mainty tsy nifankahitana nivoaka avy tao amin’ny faritra an-kavia ary narahina fipoahana tamin’io rôplanina io. Tsy loza goavana araka ny loharanom-baovao azo tany aloha izany no nisy fa tranga tahaka ny rehetra ihany ary tsy niteraka savorovoro. Tsy nisy velively ny feo mandeha fa misy tranga fampihorohoroana teny Ivato satria tsy nisy sidina iraisam-pirenena niainga tamin’ny ora nitrangan’iny olana iny ka tsy nisy mpandeha na dia iray aza tao amin’ny trano fiondranana. Nilaza ny tompon’andraikitra fa tsy nisy fiantraikany amin’ny zotra efa ataon’ny kaompania iny tranga iny.